प्रतिष्ठानको इतिहासबारे ग्रन्थ - Naya Patrika
प्रतिष्ठानको इतिहासबारे ग्रन्थ
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्नो ६० वर्षे इतिहासलाई समेटेर परिचयात्मक ग्रन्थ प्रकाशन गरेको छ । ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका गौरवमय साठी वर्ष’ ग्रन्थ प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले हीरक महोत्सवका अवसरमा प्रकाशन गरेको हो ।
ग्रन्थमा विसं २०१४ देखि २०७४ सालसम्म प्रतिष्ठानले गरेका गतिविधि तथा अनुसन्धनात्मक कार्यको चर्चा गरिएको छ । प्रतिष्ठानको स्थापना विसं २०१४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । यस वर्ष प्रतिष्ठानले ६० वर्ष पूरा गरेको छ ।
प्राज्ञ जगत् उपाध्याय ‘प्रेक्षित’, प्रा.डा. कुमारप्रसाद कोइराला, ज्ञानु अधिकारी र रमेश शुभेच्छुद्वारा लिखित ग्रन्थलाई चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ । ग्रन्थको पहिलो खण्डको लेखन प्रा. ‘प्रेक्षित’ले गरेका छन् । यस खण्डमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन र स्वरूप, प्रतिष्ठान स्थापनाबारे उल्लेख छ ।
दोस्रो खण्डमा अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनबारे प्रा.डा. कोइरालाले लेखेका छन् । ग्रन्थको तेस्रो खण्डमा अधिकारीले प्रतिष्ठानले गरेका गोष्ठी, सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेखेकी छन् । चौथो खण्डमा प्रज्ञा पुरस्कार, कविता महोत्सव, नाटक महोत्सव, कला प्रदर्शनी आदि गतिविधि समेटिएको छ ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ग्रन्थबाट ‘प्रज्ञाको इतिहास झल्किने’ दाबी गरे । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका दर्शन विभाग प्रमुख प्राज्ञ प्रा. दिनेशराज पन्तको संयोजकत्वमा ४ सय ७२ पृष्ठको ग्रन्थ तयार भएको हो ।